ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေ ရပ်စဲဖို့ မင်းကိုနိုင် တိုက်တွန်း
သန်းရွှေရဲ.သားတွေလား အာဏာရူးအမျိုးတွေပဲ အခုမှ ကချင်တွေကို အပြစ်ပုံနေသေးတယ် ဘယ်သူက တရုတ်နဲ.လင်တော်နေတာလဲ ။ သမတဦးသိန်းစိန်တောင်မှ သူရဲ.သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အနှစ် ၂၀လုံးလုံး တိုင်းပြည်အထီးကျန်နေတဲ.အချိန် တရုတ်ကပဲ အကူအညီပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး မြှောက်ပင်.နေတာလေ။ တရုတ်ကလည်း သား.သားဆိုပြီး NATURAL RESOURES တွေ အတိုင်းထက်အလွန် တရားဝင်၊ တရားမ၀င် ခိုးပြေးကုန်တာလေ။
Jan 01, 2013 12:31 PM
နင်တို.ဗမာရွာတွေကို KIO ထိ.ပါးစောကားတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်မင်းကိုယ်ချင်းနဲ.ပြန်နေချင်လို.စစ်အစိုးရရဲ. ခိုင်းစားတဲ.စစ်သားတွေအတွက် မိုင်းထောင်နေတာ။စစ်အစိုးရဲ.အုပ်ချူပ်မူကို မကြိုက်လို. ဖက်ဒရယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင်.ကို လွှတ်တော်မှာ တောင်းတယ် သူတို.အဏာရူးးတွေက ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်အုပ်ချူပ်ခွင်.မပေးလို. အခုလို ပြတနာ ဖြစ်နေတာ။အဏာရူးနေသရွေ.၊ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မဖြစ်သရွေ. တိုင်းပြည်သည်ဖျားနာအုန်းမည် ငြိမ်းချမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ မှတ်ထားလောက်ပါတယ်ဟေ. အာဏာရူးတွေနဲ.ဝေစားမျှစားတွေရဲ.
Dec 31, 2012 09:01 PM
။ခေတ်အဆက်ဆက်မှ ကိုယ်မင်းကိုယ်ချင်းနဲ.နေလာခဲ.တဲ.တိုင်းရင်းသား ကချင်တွေကိုလာ မပတ်သက်ပါနဲ.ဗမာတွေနဲ.ကချင်တွေပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး.ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းရဲ.ပင်လုံစာချုပ်ကြောင်. ဗမာတွေကို လူထင်ပြီး ပေါင်းမိလာတာပါ။
Dec 31, 2012 08:59 PM
ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုပြောခြင်တယ် ဘာကြောင့်မြန်မာအစိုး၇ ကအပြင်းအထန် ထိုးစစ်ဆင်ရတယ် ဆိုတာ အဲဒိ ကချင်တွေကကော ဘယ်လိုတွေဆန့်ကျင်ပြီး တ၇ုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး နိုင်ငံတ၇ုတ်လက်ထဲေ၇ာက်အောင် ဘယ်လိုကြံစည်နေတယ်ဆိုတာ အ၇င်သေသေချာချာလေ့လာပြီးမှ စစ်ပွဲ၇ပ်ဖို့ပြောပါ အားအားယားယား ဘယ်သူက တိုက်နေမှာလဲ
Dec 31, 2012 04:58 PM
159357 နေရပ်- ရန်ကုန် :
Agree with Ko Min Ko Naing. More leaders should speak out for peace. It is sad that killings are ongoing in Kachin and Shan states while we are witnessing opportunity for democracy in the country in general. The Government and the army should be more transparent and sincere in negotiating with the nationist groups rather than trying to eradicate one by one.
Dec 30, 2012 05:24 PM
ဗမာဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေ အယုံအကြည်နည်းပြီ ဘာဖြစ်လို.လည်းဆိုရင် ခေတ်အဆက်ဆက် အခွင်.အရေးရချင်ရင် တိုင်းရင်းသားတွေကို အသုံးပြု အခွင်.အရေးရပြီးပြီဆိုရင် စွန်.ပစ်ခံနေရတာပဲ
သူငယ်ချင်း ပြောတိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူး ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ.အကုန်ရပ် အကုန်နား ချည်းဘဲလုပ်မနေနဲ့..
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- ၇န်ကုန် :
ကိုမင်းကိုနိုင် ထောက်ခံပါတယ် မောင်ကျောင်းသား
Dec 30, 2012 08:16 AM